e.l.f.Makeup Mist & Set 60ml | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
မိတ်ကပ်ပေါ်တွင် ထပ်၍ ဆွတ်ဖျန်းနိုင်ခြင်း
မိတ်ကပ်သား ပိုတက်စေပြီး ကြာရှည်ခံစေခြင်း
သဘာဝ ပစ္စည်းများဖြင့် ဖော်စပ်ထားခြင်း
Wutt Mone Htoo
2017 ဇှနျ 3
e.l.f. Makeup Mist & Set 60ml မိတ်ကပ်လိမ်းပြီးဖြန်းလိုက်ရင် မျက်နှာကပိုလင်းတယ် နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
I love how ELF mist makes my skin look! Dewy without oily. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် Makeup Mist & Set 60ml